I-Compression Rubber Molding - I-Xiamen Jin Weitai Rubber & Plastic Co, Ltd.
Le ndlela yokubumba ivame ukuqala ngezinto zokubumba ezifakwe emgodini wokubumba ovulekile. Ingcindezi isetshenziswa ngamandla aphezulu ukufakwa kokuqukethwe ngaphakathi komgodi oshubile, oqala inqubo yokwelapha. Uma seselaphekile, isikhunta sisuswa ngophini we-ejector, noma ngokukhishwa kwencwadi ngesandla kanye nokusika kwe-flash.
Ukucindezela ukubumba kuyindlela ethandwayo yama-gaskets, ama-seal, nama-grommets kepha akuyona ukuphela kwento yonke inqubo yokumodela, sine-LSR (Liquid Silicone) Ukubumba.
Izinzuzo Zokucindezela Ukubumba
Ukuhluka Kobunzima Bodonga: Le ndlela ivumela ukwahlukahluka odongeni lobukhulu. Ngokuvamile, design ingahluka phakathi kwe-1,3 mm ukuya ku-intshi.
Idizayini engenamthungo: Ingxenye yomfaniswano yakhiwe ngaphandle kwemigqa yokugeleza noma ukugoqa. Ama-gaskets ayisibonelo esihle sokuthi ukubumba izingcingo kuvumela kanjani ingxenye ebumbeneyo. Ingxenye ikhishwa ngokuqedelwa kahle komhlaba ngokushesha.
Izindleko eziphansi: Njengobumba olunengcindezi ephansi, ukukhiqizwa kwezikhindi eziningi kwenziwa ngentengo ephansi.
Izinketho Zokusebenza okwengeziwe: Ukubumba kokucindezela kulungele izinto eziguquguqukayo, ngoba izingxenye zingahlala zithandeka ngemuva kwenqubo yokwelapha. Ngaphezu kwalokho, ama-thermosets ayatholakala ekubumbeni imithambo eminingi, evula izinketho eziningi lapho kufika isikhathi sokukhetha into yokubumba. Izinto ezisetshenziswa kakhulu zifaka i-silicone, irabha yemvelo, ne-EPDM.
Ilungele ukukhiqizwa kwevolumu ephezulu: Yize le ndlela inesikhathi somjikelezo omude, ingubumba obunomfutho ophansi, okusho ukuthi kuyabiza ukukhiqiza imithambo ehlukahlukene ngaphandle kwezindleko eziphakeme zokusebenzisa.
Izinkinga Zokucindezela Ukubumba
Isikhathi Somjikelezo Ohamba Phansi: Isikhathi esidingekayo sokuqala nokuphinda ukulandelana kokusebenza kuphakathi kwemizuzu engu-1 - 1 yokucindezela isikhunta; isikhathi somjikelezo esihamba kancane kunokubumba umjovo.
Ukukhiqiza Phansi: Lapho i-flash (i-resin ebalekela phakathi kwezingxenye ezimbili), kufanele ilungiswe ngesandla, ngaleyo ndlela inciphise ukukhiqiza. Ngokwengeziwe, awukwazi ukubhalisa kabusha lokhu okuqukethwe okweqile, okudala imfucuza ethe xaxa.
Ukutshalwa Kwezimali Zabantu Okuphakeme: Njengoba kushiwo ngaphambili, i-flash isuswa ngesandla kuma-compression molds, ekhiqiza izindleko eziphakeme zabasebenzi.
Izingxenye ezilula: Le ndlela igcinelwe izingxenye ezingashintshiwe.
I-JWT Rubber isikhuphela irabha yemvelo kanye nerabha yokwenziwa efaka:
Ukubumba okwenziwe ngobisi
Izitifiketi Zenkampani Yezokwakha Injoloba ；
Kuqinisekiswe i-ISO9001 ne-ISO14001, sinikezelwe ukukhiqiza imikhiqizo eyenziwe ngenjomeni enjoloba ephezulu futhi sizothatha izinyathelo ezidingekayo zokuqonda futhi siqiniseke ukuthi izidingo zakho zephrojekthi zinelisekile. Sicela uxhumane ne-JWT ukuthola usizo ngokuthuthukiswa komkhiqizo wakho werabha. I-JWT ingumhlinzeki ophambili wezinsizakalo zokubumba irabha, ukuqina kokucindezela.
Abasebenzi bethu bobuchwepheshe abanolwazi bazokusiza ngokuthuthukisa umkhiqizo kanye nokuklama. Umuzwa obanzi wokubumba i-JWT uqinisekisa ukuthi sihlangabezana nemininingwane yakho eqondile. Sisebenza nawe zonke izinyathelo zenqubo ukuqinisekisa ikhwalithi nezinto zokwakha ziyahlangabezana nemininingwane yakho. Xhumana nelungu labasebenzi bethu bobuchwepheshe kwa-xxx noma uQAPHELE LAPHA ukuze usithumele imininingwane.
Izinhlobo zemikhiqizo yakwaRubber esizikhiqizayo
◆Abakhiqizi bezingxenye ze-Rubber Molded
◆Umkhiqizi Wegasket weRubber
◆Umakhi weRubber Grommet
◆Ama-Rubber Coated Rollers
◆Irubber kwaBakhiqizi Bensimbi Be-Metal
◆Izingxenye Zokuhlikihla Izindiza
◆Ama-Rubber Okuphakelayo Ama-roller
◆Abenzi bezakhi zenjoloba
◆Imikhiqizo Yenjoloba Yezokwelapha
◆I-EVA Rubber Molding
◆Ama-Rubber Dock Bumpers Ahlanganisiwe
◆Izithomba zeRobber Grommet
◆Imikhiqizo ephezulu Yobumba be-Density Custom Rubber
◆Abakhiqizi Abancane bemikhiqizo yakwaRubber
◆Abakhiqizi be-Grommet USA
◆Abakhiqizi Be-Anti Vibration Mounts
◆I-Molded Rubber Covers
◆Okuhlanganisiwe kwe-Rubber Bumper
◆Umkhiqizi Wezakhi Zokubumba Izinsimbi
◆Umakhi weRubber Disc
◆Izingxenye Zokusebenzisa Injoloba
◆Imikhiqizo yeNjoloba eVulcanized
◆Umakhi weRubber Handle
◆Ama-Rubber Rollers ngokwezifiso
◆Umkhiqizi We-Rubber plugs
◆Ama-Rubber Bumpers ngokwezifiso
◆Izingxenye Zokuhlikihla Ngokwezifiso
◆Izimpawu Zokuzijobisa Zokwezifiso
◆Amarobhothi Enjoloba kanye Nezimpawu
◆Amasondo weRubber Pulley
◆Imikhiqizo ye-Rubber ye-EPDM
◆Izingxenye Zokuhlikihla Ze-EPDM
◆Abakhiqizi BeMikhiqizo Enjoloba
◆Isilinda Senjoloba Esiqinile
◆Ama-Rubber Coated Magnets
◆Abakhiqizi beGasket base-Watertight
◆Izimo Zenjoloba Ebunjiwe
◆Isigaxa Senjoloba Ebunjiwe
◆Izingxenye Zensimbi Zensimbi
◆Ukubumba Okumnyama Okumnyama
◆I-Industrial Rubber Molding
◆Abenzi beRubber Grommet
◆Isizinda Senjoloba Ebunjiwe
◆Ama-Rubber Grommets e-Custom
◆Ukunwebeka Kamasondo Rubber
◆Ama-Rubber Bumpers Ahlanganisiwe
◆Amarobhothi Obumba Amnyama
◆Ama-Rubber Grommets Ahlanganisiwe
◆Isigaxa Sokugobeka Esiguquguqukayo
◆Izingxenye Zokusebenzisa Injoloba Ezishintshiwe
◆Izingxenye Ezi-Rubber EziKhulu
◆Amabhuzu Wenjoloba Ohlanganisiwe we-Cylinder
◆Imikhiqizo enjoloba yenjoloba
◆Imikhiqizo ye-Rubber Metal Backed
◆I-Rubber Rubber ehambisanayo
◆Umakhi weRubber Stop
◆Amasondo Okuhlikihla Okujwayelekile
◆Imikhiqizo yokuhlikihla i-Precision
◆Irubber to Metal Molding
◆Umakhi weGasket we-EPDM
◆V Shape Rubber Gaskets
◆Imishini Yokuhlikihla Inqola
◆U-Shape Rubber Grommet
◆Irubber To Metal Vibration Mounts
◆Izithuthi Zezinja Zenjoloba
◆Inqubo Engcono Kunokungenisa I-Rubber To Metal
◆Okuhlanganisiwe kwe-Rubber Shore A40
◆Amamodeli weGasket Olubunjiwe
◆I-Molded Rubber to Metal Bonding
Ukubumba Inqubo Yevidiyo Nezithombe
Ikhiphedi yeSilicone, Ikhiphedi ye-Rubber yangokwezifiso, Silicone Rubber Keypad,